Alder Buckthorn (အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း) - Hello Sayarwon
Alder Buckthorn (အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Alder Buckthorn (အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း)
Alder Buckthorn (အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း) ကဘာလဲ။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Alder Buckthorn ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Hoxsey cancer formula ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်
Alder Buckthorn ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Alder Buckthorn ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Alder Buckthorn မှာ ဗီတာမင် A, B1, B2, B6, C နဲ့ အခြားအရာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ဗိုက်နာခြင်းတွေကို သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Alder Buckthorn နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ သောက်ဆေးအဖြစ် Alder Buckthorn ဟာ စိတ်ချရခြင်း မရှိပါဘူး။
Alder Buckthorn အသုံးပြုခြင်းကို စီစဉ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ နှစ်ပတ်အနည်းဆုံးကြိုပြီး ရပ်သင့်ပါတယ်။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Alder Buckthorn ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓါပြင်ပ ဆဲလ်တွေ သေဆုံးခြင်း
အူ အရောင် ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ရေများသော ဝမ်းသွားခြင်း
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Alder Buckthorn ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အချို့ဆေးတွေဟာ Alder Buckthorn နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အရောင်ကျဆေးများ – Corticosteroids): dexamethasone (Decadron), hydrocortisone (Cortef), methylprednisolone (Medrol), prednisone (Deltasone)
Water pills (Diuretic drugs): chlorothiazide (Diuril), chlorthalidone (Thalitone), furosemide (Lasix), hydrochlorothiazide (HCTZ, HydroDiuril, Microzide)
Stimulant laxatives: bisacodyl (Correctol, Dulcolax), cascara, castor oil (Purge), senna (Senokot)
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေဟာ Alder Buckthorn နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Alder Buckthorn ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အခေါက် ခြောက် – ဝ.၅-၂.၅ ဂရမ်
လက်ဖက်ရည် – ရေပွက်ပွက်ဆူ ၁၅၀ ml ထဲမှာ ဒီအပင် ၂ ဂရမ်ကို နှစ်ပြီး ၁၀-၁၅ မိနစ်ထားပါ။
Liquid extract – ၂-၅ ml တစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ပါ။ ဒီပုံစံကို အစာစားပုံပြောင်းလဲပြီး ဝမ်းပျော့ဆေးတွေ အလုပ်မလုပ်မှ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သူ့ကို ၇-၁၀ ရက်ထက်ပိုပြီး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Alder Buckthorn ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အဲလ်ဒါဘက်ခ်သွန်း က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Alder Buckthorn ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Alder Buckthorn. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-850-alder%20buckthorn.aspx?activeingredientid=850&activeingredientname=alder%20buckthorn. Accessed March 11, 2017.
Alder Buckthorn. http://www.livingnaturally.com/ns/DisplayMonograph.asp?StoreID=15F522D98A3A417FBE8D6702F135785A&DocID=bottomline-Buckthorn. Accessed March 11, 2017.